न्यूज सञ्जाल: » महिला भलिबल टोलीमा कप्तानका ५ दाबेदार !
महिला भलिबल टोलीमा कप्तानका ५ दाबेदार !
न्यूज सञ्जाल २ श्रावण २०७६, बिहीबार १९:५६
काठमाडौं । आसन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को लागि नेपाल भलिबल संघले नियमित कप्तान विनिता बुढाथोकी र उप-कप्तान मन्जु गुरुङलाई टिम बाहिर राख्दै २५ सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गर्यो ।
संघले गठन गरेको ५ सदस्यीय छनोट समितिले गत १४ जेठमा नेपाल भलिबल संघलाई २५ सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको नामावली पठाएको थियो । कप्तान र उप-कप्तान मात्रै टिम बाहिर नभई केही स्टार खेलाडीहरुनै टिम बाहिर रहेपछि नेपाली भलिबल वृत्तमा मात्रै नै नभई समग्र नेपाली खेलकुद नै तरङ्गित बन्न पुग्यो ।
केही खेलाडीहरुले विनिता र मन्जु गुरुङलाई आसन्न साफ गेम्ससम्म राखेर स-सम्मान बिदाई गरिनुपर्ने धारणा राखे । केहीले भलिबलमा यति लामो समय गरेको योगदानलाई कदर गर्न नसकेको भन्दै खेलेर केही नहुने अड्कल समेत काटे । अब कप्तान विनिता र उप–कप्तान मन्जु टिममा समावेश हुने कुनै सम्भावना नै छैन । नेपाल भलिबल संघले कप्तान विनिता र उपकप्तान मन्जुलाई स–सम्मान बिदाई गर्ने बताएका छन् ।
अब नेपाली महिला भलिबल टोलीको कप्तान को होला भन्ने विषयमा चौतर्फी कौतुहलता छाएको छ । यस्तोमा अब नेपाली महिला भलिबल टोलीले नयाँ कप्तान र उपकप्तान पाउने पक्का छ । यसबीचमा हामीले प्रारम्भिक चरणमा रहेका २५ मध्ये ५ खेलाडीलाई सम्भावित कप्तानको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
अरुणा शाही (गण्डकी प्रदेश)
अरुणा शाही गण्डकी प्रदेशकी मात्रै नभई नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी भरपर्दी खेलाडी हुन् । स्पाइकर ९हाल लिफ्टर० अरुणाले २०१४ मा नेपालमा आयोजना भएको माल्दिभ्ससँगको मैत्रीपुर्ण खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेकी थिइन् । त्यसयता, उनी टोलीको नियमित सदस्य छिन् । उनले राष्ट्रिय टोलीबाट माल्दिभ्ससँगको मैत्रीपुर्ण, भारतसँगको मैत्रीपुर्ण, साउथ एसियन आमन्त्रण भलिबल च्याम्पियनसिप, एभीसी सेन्ट्रल जोन र १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० खेलेकी छन् । अरुणा सिनियरको आधारमा पनि कप्तान बन्ने बलियो सम्भावना छ ।
कमला पुन (पुलिस)
राष्ट्रिय टोलीका पुराना खेलाडीमध्ये कमला पुन पनि एक हुन् । घुँडाको चोटका कारण कमला विश्रामपछि भर्खर मैदान फर्किएकी छिन् । राष्ट्रिय टोली र विभागीय नेपाल पुलिस क्लबबाट यसअघि लिवेरोको भुमिका खेलिरहेकी उनले दुई वर्षअघिदेखि आफ्नो पोजिसन बदलेर सेटर (लिफ्टर) को भुमिकामा खेलिरहेकी छिन् । २०१४ मा माल्दिभ्ससँगको मैत्रीपुर्ण खेलबाट राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यु’ गरेकी उनले करिव एक दर्जन खेल खेलिसकेका छन् । उनलाई पनि अबको राष्ट्रिय टोलीको सम्भावित कप्तानको रुपमा हेरिएको छ ।
सरस्वती चौधरी (एपीएफ)
सरस्वती चौधरी नेपाली टोलीको महत्वपुर्ण सदस्य हुन् । ओपन स्पाइकर उनको उच्च प्रर्दशनमा एपीएफले घरेलु भुमिमा भएका सबै प्रतियोगिता जित्न सफल भएको छ । उनकै उच्च प्रदर्शनमा नेपालले काठमाडौंमै आयोजना भएको साउथ एसियन आमन्त्रण महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा दोस्रो र भारतको गुहावटीमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कास्य जित्न सफल भएको थियो । उनले पनि २०१४ मै माल्दिभ्ससँगको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीका ‘डेब्यु गरेका थिइन् । उनलाई पनि राष्ट्रिय टोलीको सम्भावित कप्तानको रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिभा माली (न्यु डायमन्ड)
प्रतिभा माली नेपाली महिला भलिबलकी सबैभन्दा ठुला नाम हुन् । ओपन स्पाइकर प्रतिभा एक्लैले टिमलाई जिताउन सक्ने क्षमता राख्दछिन् । १३ वर्षको उमेरमै २०१४ मा माल्दिभ्ससँगको मैत्रीपुर्ण खेलबाट राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यु’ गर्दै कान्छी खेलाडी बन्दै सनसनी मच्चाएकी प्रतिभा त्यसयता राष्ट्रिय टोलीको नियमित सदस्य छिन् । खेलको आधारमा हेर्ने हो भने उनमा कप्तानी गर्ने क्षमता छ । उनले पनि राष्ट्रिय टोलीबाट करिब १ दर्जन प्रतियोगिता खेलिसकेकी छन् ।
रेश्मा भण्डारी (एपीएफ)
माल्दिभ्ससँगको खेलबाटै राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका ब्याक स्पाइकार उनी त्यसयता टोलीको नियमित सदस्य छिन् । उनलाई पनि राष्ट्रिय टोलीको सम्भावित कप्तानको रुपमा हेरिएको छ ।
यसबाहेक सिनियरको आधारमा हीरा केसी र उषा विष्ट पनि छन् ।
हाम्रो खेलकुदका अनुसार प्रारम्भिक टोलीः
सरस्वती चौधरी – एपीएफ
हिरा केसी – एपीएफ
उषा विष्ट – एपीएफ
सोफिया पुन – आर्मी
निरुता ठगुन्ना – आर्मी
संगम महतो – आर्मी
ममता डगौरा – गण्डकी प्रदेश
लक्ष्मी कुमाल – गण्डकी प्रदेश
पुष्पा शाही – कर्णाली प्रदेश